tmblog, Author at Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » About tmblog
Who is this kinda guy?
tmblog | Jokes | September 28, 2017
မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် ၁ မှတ် ! 🙂 😛 😀
မေး ။ ။ လိုတရ ဆုတစ်ခုတောင်းဆိုရင် ဘာတောင်းမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ယမကာ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ငါးခြောက်ဖုတ်လှေကြီးနဲ့ရွက်လွှင့်ချင်တယ်။
သူ ဘယ်လိုလူလဲ ?